Olee otú Naghachi Lost Files na OS X Yosemite na Yosemite Data Recovery
Nwere ike ịhụ faịlụ gị mkpa OS X Yosemite? Echegbula. Ọ bụ ebe gị Mac. Ị nwere ike na-agbalị ụfọdụ ụzọ anya maka faịlụ gị mkpa. Ejila m ezighị ezi. M na-adịghị atụ aro ka ị na-emeghe nchekwa otu-site-otu anya n'ihi na ya. E nwere mma ụzọ dị. N'okpuru ebe a bụ 2 n'ụzọ zuru ezu na-atụ aro ngwọta maka otú naghachi furu efu faịlụ na OS X Yosemite. Lelee na họrọ onye nke ahụ dị mma maka gị.
Ngwọta 1. Chọta Ne Files na Chakwasa ihie
Ngwọta 2. Gbalịa Yosemite Data Recovery ka iṅomi gị Mac nke na-efu Files
N'ozuzu-ekwu okwu, ọ bụrụ na ị na-n'aka na ị na-ehichapụ faịlụ gị mkpa, mgbe ahụ, ị ​​pụrụ ịchọta efu faịlụ site na iji Chakwasa ihie. Ị nwere ike dị nnọọ chefuo ebe ị na-etinye ya na OS X Yosemite. Dị nnọọ pịa Chakwasa ihie na n'elu nri akuku nke gị Mac, ụdị na isiokwu ka ọ na-egosi na ya pụta. Pịa N'ihi ịchọta faịlụ gị mkpa. Ọ bụ ya.
Ọ bụrụ na i nwere ike ịhụ faịlụ gị mkpa na Chakwasa ihie ma ọ bụ na ị na accidently ihichapụ faịlụ, mgbe ahụ, ị ​​ga-agbalị ndị ọkachamara Yosemite data mgbake software naghachi furu efu data si Yosemite, n'ihi na e nweghị aka ụzọ dị ime na ọrụ maka gị. Yosemite Data Recovery-enye gị 4 mgbake ụdịdị ike iṅomi gị Mac nke furu efu ma ọ bụ ehichapụ faịlụ,-enyere gị aka naghachi faịlụ mfe.
Yosemite Data Recovery - Naghachi Data si Yosemite
Na-akwado ihe karịrị 550 faịlụ na ụdị na OS X Yosemite;
Naghachi data furu efu ruru ka usoro, nhichapụ na inaccessibility;
Na-enye 4 mgbake ụdịdị ka iṅomi Mac furu efu data;
Ekwe ka ịhụchalụ faịlụ n'ihu mgbake;
Nzọụkwụ na Jiri Yosemite Data Recovery naghachi Lost / ehichapụ faịlụ na Mac
Download Yosemite Data Recovery na gị Mac. Wụnye na ẹkedori ya. Biko adịghị wụnye ngwa na mbanye ebe ị na-na na-efu gị faịlụ. Ke isi window, ị nwere ike ịhụ na e nwere 4 mgbake ụdịdị: Lost Njikwa Iweghachite, Raw Iweghachite, nkebi mgbake, na Wubàtá Iweghachite. N'ihi na onye ọ bụla mgbake mode, na ị na-enwe ike ịhụ ya nkọwa. -Ekwu, na-eji 'Echefuola File Iweghachite' mode bụ ezuru gị naghachi faịlụ na OS X Yosemite.
Nzọụkwụ 2 iṅomi gị Mac furu efu faịlụ
Họrọ ezi uche mbanye ebe ị na-efu gị faịlụ na pịa 'iṅomi' button, na-ekwe usoro ihe omume ahụ furu efu faịlụ maka gị. Ọ bụrụ na ị hụrụ furu efu faịlụ, ị nwere ike họrọ 'Deep iṅomi'. Ọ ga-ewe oge, ma nwekwara ike ịhụ ndị ọzọ faịlụ na zuru ezu nchekwa Ọdịdị.
Nzọụkwụ 3 Preview furu efu data tupu naghachi data si Yosemite
Mgbe iṅomi okokụre, faịlụ niile hụrụ na-depụtara na N'ihi window na mbụ ụzọ. Si ebe a, ị nwekwara ike ịchọ site na iji kọmputa ede faịlụ aha ke search mmanya na n'elu nke mpio naghachi ehichapụ data na Yosemite ngwa ngwa. Tupu mgbake, ịhụchalụ faịlụ iji jide n'aka na ọ bụ faịlụ gị mkpa.
Nzọụkwụ 4 Naghachi data si Yosemite
Ọ bụrụ na faịlụ ị chọrọ iji naghachi si Yosemite bụ na ndepụta na N'ihi window, naghachi ya, ị dị nnọọ mkpa ka ego faịlụ na pịa 'Naghachi' n'elu nke usoro ihe omume. Na mgbe ahụ chekwaa faịlụ azụ gị Mac ọzọ. Adịghị etinye ya na nchekwa ebe ọ na-efu. Ma, mgbake nwere ike ada.
Download Yosemite Data Recovery ikpe mbipute inwe a na-agbalị ozugbo!
Ọzọ Isiokwu Banyere Yosemite Ị pụrụ amasị
Naghachi ehichapụ faịlụ site bupụrụ Mkpofu on Mac
Naghachi ọdịnaya nke kọmpat Flash (CF) Kaadị
Naghachi Mac Files mgbe Formatting Macintosh HD
Downgrade Yosemite ka Mavericks
-Enye ume ọhụrụ New Mail na Mac Mail
Top 20 iOS 9 Data Nyefee Ngwaọrụ: Nyefee Data N'etiti iOS na Android Devices
Olee otú Naghachi ehichapụ faịlụ site Computer
> Resource> Naghachi> Yosemite Data Recovery - Naghachi Lost Data si Yosemite